दुनियाँ मोहित पार्ने फिगर भएकी सुन्दरी….(फोटो फिचर) – Gandaki Chhadke
दुनियाँ मोहित पार्ने फिगर भएकी सुन्दरी….(फोटो फिचर)
By गण्डकी छड्के On Dec 24, 2020
एजेन्सी , सामाजिक संजाल यस्टो ठाँउ हो जहाँ अलिकती फरक कुराहरू एकछिनमै भाइरल भइहाल्छन् । झनै सुन्दर युवतीको तस्बिर भाइरल हुन त केहि समय नै लाग्दैन । हेर्दा निकै ठुली देखिएपनि उनि अहिले मात्रै २३ वर्षकी भइन् । उनि लामो समयदेखि निरन्तर आफ्नो आकर्षक शरीरका कारण संसारभर चर्चामा छिन् ।यस्तै एक सुन्दरीका तस्वीरले अहिले इन्टरनेटमा तहल्का मच्चाइरहेका छन् । उनको सुन्दरता देखेर मानिसहरु निकै मो हित भइरहेका छन् । यी सुन्दर युवतीको नाम हो ग्रेसिएला मोन्टेस ।
उनि अमेरिकाको क्या लिफोर्नियामा बस्छिन् । ग्रेसिएला पेशाले एक मोडल हुन् र हेर्दा निकै ठुली देखिएपनि उनि अहिले मात्रै २३ वर्षकी भइन् । उनि लामो समयदेखि निरन्तर आफ्नो आकर्षक शरीरका कारण संसारभर चर्चामा छिन् । ग्रेसिएलाको सुन्दर शरीर देखेर धेरैले उनले प्ला स्टिक सर्ज री गराएको ठान्छन् तर उनले प्या स्टिक स र्जरी गराएकी होइनन् ग्रेसिएला सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय छिन् । उनी तस्बिरहहरू इन्स्टाग्राममा शेयर गरिरहन्छिन् । ग्रेसिएलाको इन्स्टाग्राममा झण्डै १२ लाख बढी फलोअर छन् ।
ग्रेसिएलालाई क्यालिफोर्नियाकी सबैभन्दा हट मोडल मानिन्छ । ग्रेसिएलाको सुन्दर शरीर देखेर धेरैले उनले प्ला स्टिक स र्जरी गराएको ठान्छन् तर उनले प्या स्टिक सर्ज री गराएकी होइनन् । ग्रेसियाले मिस सान जुआन युएसएको उपाधि जितिसकेकी छिन् ।
१५ तस्वीरमा हेर्रुनुहोस् रुपवती रक्षा (फोटो फिचर)
जस्तो सुकै दा’दको स’मस्याबाट पनि केहि दिन मै छु’टकारा दिन्छ यो घरेलु उपायले, जानिराख्नुस् !
भारतीय मिडियाले गर्यो नेपाली नायिकाको चर्चाः तर शेयर गर्यो उल्टो तस्बिर [त्रुटीसहित]
चिहान खनेर साथीको ला’श निकाले, मोटरसाइकलमा सहर घुमाए, कारण के होला ?